Waa maxay u jeedka safarka RW Rooble ee Masar? | KEYDMEDIA ONLINE
Waa maxay u jeedka safarka RW Rooble ee Masar?
Wafti heer sare ah oo uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Rooble, ayaa maanta ku wajahan dalka Masar, halkaas oo ay kulamo kala duwan kula qaadan doona Madaxda Dalka Misraim.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa maanta ku wajahan dalka Masar, halkaas oo uu kulamo kula yeelan doono Madaxweynaha dalkaas Abdel Fattah El-Sisi.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa casuumad rasmi ah ka helay Madaxweynaha Masar, waxaana saacadaha soo socda la filayaa in isaga iyo waftigiisu ka ambabaxaaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Sida ay Keydmedia Online sheegtay 11 August 2021, U jeedka socdaalka Rooble, ayaa ku qotama, hagaajinta xiriirka labada waddan oo hoos u dhacay afartii sano ee la soo dhaafay, kadib markii Farmaajo, uu si lala yaabay uga baxay garabka dalka Masar, isla-markaaana la jirsaday dalka Itoobiya oo khilaaf dhanka biyaha ah uu kala dhaxeeyo Egypt.
Safarkaan ayaa ah midkii shanaad ee Ra’iisul Wasaar Roobl, u baxo inta uu xilka hayay, wuxuuna hore ugu socdaalay waddamada Sucuudiga, Jabuuti, Ingiriiska iyo Kenya oo dhawaan uu ka soo laabtay.
Xiriirka Soomaaliya iyo Masar;
Masar waxay ka mid tahay waddammadii ugu horreeyey ee aqoonsaday madaxbannaanida Soomaaliya 1960-kii, waxaana si weyn looga qadariyaa Soomaaliya AUN Maxamed Kamaaludiin Salaax, lataliyihii Afrika ku metelayey Ergada tala-siinta Wasaayada Talyaaniga ee Soomaaliya, kaas oo Muqdisho lagu dilay 1957-dii, kadib markii uu dadaal u galay sidii uu Soomaaliya uga caawin lahaa xornimo iyo in aan la kala jarin midnimada dhuleed ee Soomaali weyn.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, ayaa la filayaa inuu soo af-jaro madmadowga uu Farmaajo galiyay xiriirka soo jireenka ah ee Masar.